12 Askari Kenyaan Ah Oo Looga Dilay Weerar Shalay Ka Dhacay Duleedka Mandheera [Faah Faahin].
Tuesday November 07, 2017 - 14:36:01 in Wararka by Super Admin
Waxaa sii kordhay khasaaraha nafeed ee ciidamada Kenya kasoo gaaray dagaal culus oo shalay ku qabsaday deegaan dhaca duleedka magaalada Mandheera ee dhulka NFD balse Kenya u bixisay waqooyi Bari.
Sawir hore Askari Boolis ah oo dul taagan gaari lagu gubay Arabia duleedka Mandhera
Wararka ka imaanaya Kenya ayaa sheegaya in ugu yaraan 12 askari oo katirsan ciidanka Booliska lagu dilay weerar gaadmo ah oo xoogaga Katirsan Al Shabaab u dhigeen ciidamo kolonyo ah oo xilligaas ku socdaalayay deegaanka lagu magacaabo Dabasiti.
Warbaahinta Kenya oo soo xiganaysa saraakiil katirsan dowladda ayaa sheegtay in ugu yaraan 12 askari lagu dilay weerarkii shalay islamarkaana 2 gaari oo nuuca dagaalka ah lagu gubay.
dhinaca Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda weerarkan ayaa xaqiijisay in weerarka ay fuliyeen ciidamo ka tirsan Mujaahidiinta lana dilay in ka badan 15 ka tirsan ciidamada booliska Kenya.
"Sarkaal ka tirsan Mujaahidiinta oo la hadlay Idaacadda Islaamiga Andalus ayaa sheegay in weerarka lagu dilay ugu yaraan 15 askari oo ka tirsan ciidamada Police-ka ee Xukuumada Kenya, lagana qaatay hubkooda" ayaa lagu yiri war lagasii daayay Andalus.
Waa weerarkii ugu dhiig daadashada badnaa ee ciidanka Kenya uu lakulmo tan iyo markii Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorashooyinkii madaxtinimada Kenya ee dhaca daba yaaqadii bishii October ee lasoo dhaafay.
Kumanaan katirsan melleteriga Kenya ayaa isagaoo baxay deegaanno katirsan Gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya kadib weeraro is xigxigay oo uga yimid ciidamada Xarakada Jihaadiga Al Shabaab waxaana magaalooyinka ciidanka Kenya isaga firxadeen kamid ah Baardheere iyo Tarako.